Roy Hodgson: Rooney wali waa muhiim - BBC News Somali
Roy Hodgson: Rooney wali waa muhiim
28 Maarso 2016
Tababaraha Kooxda England Roy Hodgson ayaa ku adkaysanaya in kabtan Wayne Rooney uu wali muhiim u yahay qorshihiisa Euro 2016, inkasta oo kooxdiisu ay ka adkaatay Germalka oo koobka adduunka haysta iyaga oo weerar yahankaasi ka maqanyahay.
Ciyaaryahanka Manchestr United uga cayaarta safka hore, Rooney ayaa u fadhiya dhaawac ka soo gaaray jilibka, iyada oo kooxdan uu watay tababare Hodgson ay ka soo kabteen laba gool oo hore loogu lahaa ka dib markii ay guul ka soo hoyiyeen Berlin kaddib markii ay ku badiyeen 3-2.
jiilka da’da yari ayaa ka soo dhlaalay kaalintooda inkasta oo uu ka maqnaa ciyaaryahan wayn.
Dele Alli oo ah 19 jir u safta kooxda Tottenham ayaa ahaa xiddiga ciyaarta, ciyaarwadaagiisii uu la lahaa saaxiibkii Harry Kane oo ah weeraryahan 22 jir ah aya suurto galisay in ay England soo rogaal celiso.
Jamie Vardy, ciyaartoyga Leicester City, ayaa isna buuxiyay halkii Rooney oo goolkiisii ugu horreeyay u dhaliyay xulka England, haseyeeshee tababare Hodgson ayaa yiri waa in aan soo celiyaa Wayne waayo waa kabtanka kooxda kooxdana si fiican buu u hogaaminayay labadii sanno ee la soo dhaafay.
Hodgson wuxu ku adkaystay in ciyaartoygan 30 jirka ahi yahay ninka ugu gool dhalinta badan kooxda England waxuunu dhaliyay 51 gool 109 ciyaarood oo uu saftay.